Ngwaahịa ndị a gosipụtara dị ole na ole n'ime ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ anyị na-enye. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa anyị zuru oke, gụnyere ndị na-egosighi ebe a na weebụsaịtị anyị, biko kpọọ anyị na + 86-0319-5250815, ma ọ bụ tinye arịrịọ site na ụdị ịkpọtụrụ anyị. Akụkụ akụkụ nke ndị na-emepụta ihe mbụ bụ naanị maka ebumnuche. Akụkụ ọ bụla egosiri ga-adaba na ngwa ika akpọrọ aha ya. Kwụ Tergwọ Okwu: L / C, D / A, D / P, Paypal, Western Union, TT Min.Order ibu: 100 Ibe / ...
Ime dayameta: 84mm;
Mpụga Mpụga: 104mm;
UTgbọala akụkụ Crankshaft N'azụ Oil Akara OEM 90311-40022 maka Toyota
Ime dayameta: 40 mm
Mpụga Elu: 55 mm
Obosara: 6 mm
Atụmatụ: 1) .Excellent anwụ na mgbanwe na iji. 2) .Ugo a kwadebere nke ọma na-eme ka nkwụsi ike na nkwụsi ike ogologo. 3) .Ọ magburu onwe ya na iguzogide okpomọkụ, mmanụ, na iyi. 4) .Show mụ na elu-ọsọ adiana. 5). Eguzogide okpomọkụ, mmanụ, ike ọgwụgwụ, ịka nká na esemokwu n'ihi oke magburu onwe ya na 6). Ike dị ukwuu, nnukwu ọsọ, ogologo ndụ ọrụ, obere mgbagha, obere oghere na-etinye Ngwa: 1.Nyere maka igwe ọkụ eletrik, injin na-ere ọkụ n'ime ụlọ, na nnyefe ike ...
Ngwaahịa Ihe mkpuchi mkpuchi valvụ bụ mkpuchi ọla nke dị n'elu igwe. Ihe nkpuchi ma ọ bụ nke roba na-ekpuchi mkpuchi valvụ na injin ahụ. Ihe mkpuchi valvụ na gasket mechiri elu nke engine ahụ ma gbochie nkwụsị mmanụ. Ihe mkpuchi ahụ bụ mbughari, na-enye ohere ịnweta ndozi valvụ ahụ. N'ihi na elu okpomọkụ nke engine, valvụ mkpuchi gaskets nwere ike ịghọ kenkuwa na-agbasa. A na-eji akwa gaskets anyị dị elu nke ga-agwụ ike, na-egbochi mmanụ mmanụ mmanụ ọ bụla ...
Ngwaahịa Ama Nkọwapụta Spark nkwụnye OEM NO 90919-01210 Ebe nke Si Malite China Size Standard na ahaziri Fine Diamater Ultra-fineIridium Alloy Center Electrode 2Platinum-tipped Ground Electrode Ala electrode nwere a platinum n'ọnụ, si ahụmahụ na platinum plọg. Nke a na - edozi electrode nke ọma ma na - eme ka ogologo oge dịgide. 3High Ike Insulator N'iji nnukwu ike seramiiki insulator maka engines LPG na-eme ka ike dị elu site na 20% karịa insulators. Magburu onwe ya ...
Imirikiti ngwaahịa na-abịa dị ka ngwa zuru ezu, biko jụọ maka nhọrọ ngwa ọdịnala anyị. Ngwaahịa ndị a gosipụtara dị ole na ole n'ime ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ anyị na-enye. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa anyị zuru oke, gụnyere ndị na-egosighi ebe a na weebụsaịtị anyị, biko kpọọ anyị na + 86-0319-5250815., Ma ọ bụ nyefee arịrịọ site na ụdị ịkpọtụrụ anyị. Akụkụ akụkụ nke ndị na-emepụta ihe mbụ bụ naanị maka ebumnuche. Akụkụ ọ bụla egosiri ga-adaba na ngwa ika a kpọtụrụ aha na ya ...
1. Ogo: Ogo izizi na ịrụ ezigbo ọrụ. 2. Price: Ezi uche price dabeere na ibe uru na ezi mgbe-sales ọrụ. 3. Ọrụ: Ndị ọrụ ahịa niile nwere ahụmịhe nke ọma na ọrụ, ezigbo nkwukọrịta n'asụsụ Bekee, wdg. 5. Ezigbo nkwụsi ike na mgbanwe na iji. 6. Udọ a kwadebere nke ọma na-eme ka nkwụsi ike na nkwụsi ike ogologo. 7. Ọ magburu onwe ya na iguzogide okpomọkụ, mmanụ, na iyi. 8. Gosi kwụsiri ike na ntụgharị ọsọ ọsọ. 9. Eguzogide okpomoku, mmanu, ike ọgwụgwụ, nká na esemokwu ruru ...
Product Info Description Crankshaft Oil Akara OEM NO 90311-32020 Ebe nke Si Malite China Size 32 * 46 * 6 1.Quality: qualitydị mbụ na ezigbo ọrụ. 2.Price: Ezi uche price dabere na ibe uru na ezi mgbe-sales ọrụ. 3.Service: Ọrụ ndị ahịa niile nwere ezigbo ahụmịhe na ọrụ, ezigbo nkwukọrịta n'asụsụ Bekee, wdg. L Anyị ga-enye gị ọnụahịa na-ezo aka na arịrịọ gị zuru ezu, yabụ biko jiri obiọma gwa anyị akụkụ nke ọ bụla, ụdị igwe, ọnụ ọgụgụ gị, size, wdg l ...
Product Info Description Crankshaft Oil Akara OEM NO 90311-45003 Ebe nke Si Malite China Size 45 * 62 * 9 Paykwụ Tergwọ Okwu: L / C, D / A, D / P, Paypal, Western Union, TT Min.Order ibu: 100 Ibe / Iberibe Ebe nke Si Malite: China: Packaging Nkọwa 1. Standard Box 2. Anọpụ iche Box 3. Ahịa'S chọrọ Box Port: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Yiwu, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Yantai, na ndị ọzọ Port China nzipu Oge: 5 -30 ụbọchị Mbupu: Express, Ikuku ma ọ bụ Sea Product Structure Anyị Service OE ...
Product Info Description Crankshaft Oil Akara OEM NO 90311-90006 Ebe nke Si Malite China Size 90 * 110 * 10 Paykwụ Tergwọ Okwu: L / C, D / A, D / P, Paypal, Western Union, TT Min.Order ibu: 100 Ibe / Iberibe Ebe nke Si Malite: China: Packaging Nkọwa 1. Standard Box 2. Anọpụ iche Box 3. Ahịa'S chọrọ Box Port: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Yiwu, Shanghai, Ningbo, Qingdao, Yantai, na ndị ọzọ Port China nzipu Oge: 5 -30 ụbọchị Mbupu: Express, Ikuku ma ọ bụ Oké Osimiri Product Structure Anyị Service ...
Akụkụ mapụtara, Akara Nkebi, Mmanu mmanu, Silicone Rubber Akara, Control Ogwe aka Bushing, Auto ngwa,